Eriri Optic nchupu Box Manufacturers & Suppliers - China Eriri Optic nchupu Box Factory
Eriri optic nchupu igbe ọzọ akpọ eriri optic ọnụ igbe bụ a ọnụ ngwaọrụ nke eriri optic cable, otu njedebe bụ ngwa anya cable na ndị ọzọ bụ ọdụ nke eriri optic. Fiber optic termination igbe dị mma maka ijikọta eriri fiber optic na pigtail, ọ na-enye ụlọ dị nchebe ma dị nchebe nke na-echebe mpempe akwụkwọ fiber optic ma mee ka nyocha na nkesa dị mfe na netwọk nkwukọrịta FTTx.
A na-eme igbe nkesa Jera dị ka akara akara IP, nke na-enye ohere ka igbe ndị ahụ jiri n'ime ụlọ na n'èzí. A na-eji ya dị ka ebe nkwụsị maka eriri feeder iji jikọọ eriri USB na sistemụ nkwukọrịta FTTx. Enwere ike ime eriri eriri, kewaa, nkesa na igbe a, ma ugbu a ọ na-enye nchebe na njikwa siri ike maka ụlọ ọrụ FTTx.
Dị iche iche nke eriri optic nkesa igbe na-ekewa dị ka eriri cores ikike.Our nchupu igbe bụ ike arụnyere na eriri optic udọ, kwachie udọ, pigtails udọ n'ụzọ dị mfe.
Jera nyochara ọtụtụ atụmatụ nke igbe nkwụsị fiber, anyị na-etinye onwe anyị iji nye ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya, na-adịgide adịgide ma na-akwụ ụgwọ. Jera na eriri optic nchupu igbe na-enye n'ibu nchedo, mgbanwe eriri ụzọ management na njikwa.
Anyị na-enye ngwa ọrụ niile maka FTTH network network: Fiber optic adapter, fiber optic patch cord, fiber optic splice closures, dobe eriri clamps, ogwe osisi, igwe anaghị agba nchara na wdg. Ngwa FTTH niile gafere usoro nyocha ụdịrị ụdị. nke dị na ụlọ nyocha anyị dị n'ime, dị ka + 70 ℃ ~ -40 ℃ Ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri na-agba ịnyịnya, ule ike ike, ule Aging, ule IP na wdg.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ gbasara igbe nkesa fiber optic ndị ahụ.
Eriri optic cable nkesa igbe, FODB-16X
Ftth USB ọnụ igbe, FODB-16A.1
Eriri optic cable nkesa igbe, FODB-2
Eriri optic cable nchupu igbe, FODB-4
Eriri optic nkesa igbe, FODB-6
Ime ụlọ eriri USB nkesa igbe, FODB-8R
Ftth eriri USB faceplate, ODP-02
Eriri ngwa anya nkesa sockets, ODP-06
Eriri ngwa anya nkesa anya, ODP-02M
Eriri isi nchedo ikpe, PC-1-1